Accueil > Gazetin'ny nosy > Nodimandry ny Me Andriantsotsy Fulgence: Banga iray indray ny laharan’ny mpanao pôlitika malagasy
Nodimandry ny Me Andriantsotsy Fulgence: Banga iray indray ny laharan’ny mpanao pôlitika malagasy
Semban-drahona indray ny Antoko Monima Ka Miviombio. Niamboho ny sabotsy faha- 31 martsa teo ny Maître Fulgence Andriantsotsy. Mpisolovava, mpiaro ny mpikatroka Monima nandritr’ireny fotoana nafana tamin’ny Repoblika faharoa ireny, mpiaro ihany koa ny tantsaha tany amin’ny faritra Vatovavy Fitovinany, faritra Atsimo Atsinanana, faritra Atsimo Andrefana ary faritra Atsimon’ny Nosy iny. Sady mpitolona Monima Ka Miviombio tsy nivadi-belirano izy. Ny Me Andriantsotsy Fulgence no filohan’ny Komitim-pifidianana Monja Jaona tamin’ny fifidianana filohampirenena teto Madagasikara tamin’ny taona 1989. Mpikambana tao anatin’ny Birao Pôlitikan’ny Monima izy hatramin’ny 1989 no nankaty.
Mirary fiononana ho an’ny vady aman-janany sy ny ankohonany ary ny fianakaviany izahay eto amin’ny La Gazette de la Grande Ile, ary mankahery azy ireo sy ny Antoko Monima amin’izao fisarahana an-tany izao.